ဆန်နီနေမင်း: မိမိကိုယ်ကို သိကြရဲ့လား
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အလုပ်များနေတာနဲ့ (၃)ရက်ကျော် အချိန်ကုန်သွားလို့ ကိုယ့်အတွက်လည်း စာမရေးဖြစ်၊ အများအတွက်လည်း ဆောင်းပါးရော၊ အမေးအဖြေရော မရေးဖြစ်သေးပါ။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ပါးက ဟာသတစ်ခုပြောတာကို ဦးဇင်းအကြံရတာနဲ့ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ပညာပေးချင်လို့ ဟာသရော ဦးဇင်းအကြံလေးပါ ချက်ခြင်းရေးသားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ ဟာသလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ " ကြက်ဥနှင့်ဘဲဥရောင်းတဲ့ အထမ်းသမားတစ်ယောက်ဟယ လမ်းမပေါ်မှာ ကြက်ဥလား? ဘဲဥလား? ဆိုပြီး အော်ဟစ်ရောင်းသွားနေတယ်တဲ့။ အဲဒါကို အဘိုကြီးတစ်ယောက်ကကြားပြီး အထမ်းသမားကို " မင့်ကြက်ဥတွေ၊ ဘဲဥတွေရောင်းပြီး ကြက်ဥနှင့်ဘဲဥတောင် မခွဲခြားတတ်ဘူးလားလို့ အပြစ်တင်ကာ ငါပြောပြမယ် သေချာမှတ်ထားလို့ပြောပြီး ရှေးကအထမ်းထဲမှာပါတဲ့ အ၀ါရောင်သမ်းနေတဲ့ဟာက ကြက်ဥ၊ နောက်အထမ်းမှာပါတဲ့ အဖြူရောင်နဲ့ကဟာက ဘဲဥဆိုပြီး ခွဲခြားပြလိုက်ပါသတဲ့"။
ဒီနေရာမှာ ဦးဇင်းလည်း စဉ်းစားမိသွားပါတယ်။ ဘာကို စဉ်းစားမိသလဲဆိုတော့ မိမိတို့ လူသားများဟာ လူ့တော့ဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူဆိုတာရော သေချာရဲ့လား? လူဆိုရင် လူလိုရော နေထိုင်ပြုမှုကျင့်သုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်သလား? မိမိတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင် ကျင့်ဆောင်ကြိုးကုတ်မှုရှိရဲ့လား? ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ဆန်းစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ခြင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ အရာတွေပါ။ ဒါမှသာ မိမိတို့ဟာ လူဖြစ်မှန်းသိပြီး လူပီသတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီလို မစဉ်းစား ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အဘိုကြီးထင်နေတဲ့အတိုင်း ကြက်ဥဘဲဥရောင်းနေပေမဲ့ ကြက်ဥဘဲဥမခွဲခြားတတ်သေးသလို မိမိတို့ဟာလည်း မိမိကိုယ်ကို ဘာဆိုတာ သေချာမသိသေးတဲ့သူများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်သူအားလုံး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကောင်းသောအကြံများကြံစည်နိုင်ကာ ကောင်းမှုများနဲ့သာ အချိန်ကုန်လွန်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်.......။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 11:10 PM